'I-Crazy Samurai' ine-77-Min yokuqala yeHlabathi. Ukulandelwa kweFilimu yokuThatha inyathelo elinye
Ikhaya	Iindaba ezothusayo zoLonwabo	'I-Crazy Samurai' ine-77-Min yokuqala yeHlabathi. Ukulandelwa kweFilimu yokuThatha inyathelo elinye
by UTimothy Rawles January 11, 2021
by UTimothy Rawles January 11, 2021 60,697 imbono
I-icon yaseJapan yobugcisa bemfazwe: Tak Sakaguchi (Ukuqobisana, Ukunyuka komatshini wentombazana) ufumana intlawulo ephezulu kwifilimu I-Crazy Samurai: 400 vs. 1. Itreyila ingezantsi. Lo mboniso bhanya-bhanya usekwe kwibala lobugcisa bemfazwe HAYI-YAH! ngoFebruwari 12, 2021, ngaphambi nje kweDigital yayo, iBlu-ray, kunye neDVD yehla ngoMatshi 2 ukusuka Well Go USA Ukuzonwabisa.
“Eyona nto iphambili kule bhanyabhanya ingaqhelekanga kukulandelelana kwemizuzu engama-77 kudutyulo olunye oluqhubekayo, 'idabi lomdyarho [elikhuphisana] nabakhe bakhe bathwetywa' (Forbes). UMlawuli uYuji Shimomura (Ukufa, Re: Ukuzalwawenze into eyindumasi ngokuphumeza ubukrelekrele ojikeleze uSakaguchi, odlala eyona ndoda idumileyo yaseJapan yokuphatha amakrele — uMiyamoto Musashi (1584-1645), igorha elingoyiswanga kwimilo engama-60 ubuncinci — njengoko eqhubeka nelona dabi lakhe linzima. ”
Well Go USA Ukuzonwabisa
Nantsi i-synopsis ye I-Crazy Samurai: 400 vs. 1:
Xa inkosi yama-Samurai ifika ukuze idibanise u-Yoshioka dojo ohlazileyo, uhamba waya kwindawo yokulalela. Ngokulandelelana, ukuthatha inyathelo elinye ngokulandelelana kwefilimu, uMiyamoto Musashi (Tak Sakaguchi) ulwa ubomi bakhe ngokuchasene namagorha angama-400, efumana indawo kwimbali njenge Uhlanya uSamurai Musashi.
I-CRAZY SAMURAI: 400 vs. 1 inexesha lokubaleka elimalunga nemizuzu engama-92 kwaye alikahlelwa.